(၁၀,၀၀၀)ကျပ်ဖိုး Codashop တွင်ဝယ်ယူခွင့် Giveaway! | Codashop Blog MM
Home Promo (၁၀,၀၀၀)ကျပ်ဖ...
(၁၀,၀၀၀)ကျပ်ဖိုး Codashop တွင်ဝယ်ယူခွင့် Giveaway!
Codashop အကြောင်း Review ရေးပြီး (၁၀,၀၀၀)ကျပ်ဖိုး Codashop တွင်ဝယ်ယူခွင့် ကံထူးနိုင်မယ့် Giveaway!!!
👉 Codashop ရဲ့ တရားဝင် Facebook Page ရဲ့ Reviews ဆိုတဲ့နေရာမှာ Recommend လုပ်ပြီး Review လေးရေးခဲ့ပေးပါ။ စာနဲ့လိုက်ဖက်ပုံတွေကိုလည်း နှစ်သက်သလိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
👉 Review ရေးထားတဲ့ပိုစ့်ကို Screenshot ရိုက်ပြီး ထိုဓာတ်ပုံကို Facebook Page ရှိ အစီအစဥ်ကြေညာသောပိုစ့်မှာ ကောမင့်ချန်ခဲ့ပါ။
👉 ကံထူးတဲ့အခါ ကိုယ်ဝယ်ယူချင်တဲ့ ဂိမ်းအမည်နဲ့ ID ကိုလည်း ထိုပိုစ့်၏ကောမင့်မှာ ချန်ထားခဲ့ပါနော်…
Codashop ရဲ့ တရားဝင် Facebook Page သို့သွားရန်
❓ Page Review ဘယ်လိုပေးရမလဲ အသေးစိတ်သိချင်လား❓
💡 Page အပေါ်နားမှာ Home | Events | Posts ဆိုတာရဲ့ဘေးက Reviews ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားပါ။
💡 “Do you recommend Codashop?” ဆိုတဲ့နေရာမှာ Yes ကိုရွေးချယ်ပါ။ ပြီးရင် Public ကိုရွေးချယ်ပြီး Codashop အကြောင်း Review လေးတွေရေးလို့ရပါပြီ။
🎁 Giveaway လက်ဆောင်
(၁၀,၀၀၀)ကျပ်ဖိုး Codashop မှာဝယ်ယူခွင့်လက်ဆောင် (၁၀) ခု
မှတ်ချက်။ ။ကံထူးရှင် အလိုရှိသည့်ဂိမ်းအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဈေးနှုန်းတွေထဲက (၁၀,၀၀၀)ကျပ်ထက်မကျော်တဲ့ အများဆုံးပမာဏအတွက် (၁)ကြိမ်ဝယ်ယူခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူခွင့်လက်ဆောင်ရတဲ့ ကံထူးရှင်က Comment မှာချန်ထားတဲ့ Game ID ထဲသို့ Codashop မှတိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဥ်ကို ၂၀၂၂၊ ဇန်နဝါရီ (၁၄) မှ (၂၀)ရက်နေ့အထိ ပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ထားသောရက်အတွင်း Page မှာ Review ရေးသားတဲ့ဘော်ဒါတွေထဲက အရေးအသားကောင်းကောင်းနဲ့ Codashop မှာဈေးဝယ်တဲ့အတွေ့အကြုံကို အကောင်းဆုံးဖော်ပြနိုင်တဲ့သူ (၁၀)ယောက်ကို ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဤအစီအစဉ်တွင် Codashop Myanmar မှဝန်ထမ်းများ ပါဝင်ခွင့်မရှိပါ။
ဤအစီအစဥ်မှရရှိမည့် ဆုလက်ဆောင်ကို ငွေသားဖြင့်လဲလှယ်ခြင်း၊ အခြားသူများကို ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းမပြုလုပ်ရ။
အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာပါက Codashop Myanmar ၏အဆုံးအဖြတ်သာလျှင် အတည်ဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုပါက Codashop Myanmar Facebook Messenger ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Previous articleEasyPoints နဲ့ ဝယ်ပြီး 52% အထိ UC လက်ဆောင်များရယူပါ!
Next articlePUBG Mobile အတွက် EasyPoints နဲ့ UC 113 ဝယ်ယူပြီး အထူး Item များကံစမ်းလိုက်ပါ!
∆Phoenix∆ January 17, 2022	At	3:38 pm
အစတုန္းက ml daimondsေတြဘယ္လို၀ယ္ရမလည္းမသိခဲ့ဘူး ေနာက္ေတာ့googleမှာml dai ၀ယ္နည္းဆိုျပီးရိုက္ရှာခဲ့တယ္အဲ့ဒီကေနစျပီးcoda shop myanmar ကိုသိခဲ့တယ္။daiလိုတိုင္း၊ml မှာeventေတြလာတိုင္းမှာလည္းcoda shop ကေနdaiမ်ား၀ယ္ျဖည့္ခဲ့ပါတယ္ ။စိန္ျဖည့္ရတာလည္းလြယ္ကူျမန္ဆန္တယ္ ။က်ုပ္ကေတာ့coda shopကိုအရမ္းျကိုက္ပါတယ္😍😍
gumjala January 17, 2022	At	6:28 pm
Codashop အကြောင်း Review ကောင်းကောင်းလေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်… 🥰 ဒီ Giveaway မှာပါဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ Codashop MM Facebook Page မှာပါဝင်ပေးပါဗျ။
Ram January 17, 2022	At	2:03 pm
အဆင်ပြေပါတယ် ယုံကြည့်စိတ်ချစွာဝယ်ယူလို့ရပါတယ် အလိမ်အညာ မရှိတော့ game မှာ skill ကလည်းကြမ်း skin လှ
coda dia uc. another. In game တွေလည်းဝယ်ယူလို့ရတော့ အရမ်းအဆင်ပြေတယ် ဝယ်p စောင့်စရာမလို့ဘဲ game ထဲ ဝင်လို့တာနဲ့ dia ရောက်နေတော့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့event ပျော်ပျော်ကြီးလှည့် coad shop မမေ့ပါနဲ့
MARKUS January 16, 2022	At	4:09 pm
gumjala January 17, 2022	At	6:29 pm
mg mg January 16, 2022	At	1:54 pm
Kung myat san January 15, 2022	At	10:11 pm
အဆင်ပြေပါတယ်ဗျ ဝယ်ယူရတာလွယ်ကူတေ လိမ်ညာမရှိတဲ့codashopကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ နောက်လည်းဒီထက်မကရောင်းအားကောင်းပါစေဗျ
Kung myat san January 15, 2022	At	10:07 pm
ဝယ်ရတာလွယ်ကူတေ လိမ်လည်းမလိမ် အဆင်ပြေပြေလေးနဲ့ ရောင်းပေးတဲ့ coda shop ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါ်ဗျ
Zayyarphyoe January 15, 2022	At	2:24 am
Very good codashop
Htut Myat Lin January 14, 2022	At	10:27 pm